Archive du 20200710
Coronavirus teny Alakamisy Fenoarivo Nijoro vavolombelona ilay rangahy sitrana
Efa sitrana soamantsara avokoa ireo fianakaviana iray trano nararin’ny coronavirus teny amin’ny Fokontany Antanety, kaominina Alakamisy Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Tsy maharaka ny hopitaly sy ny mpitsabo Amporisihana ny fitsaboana any an-trano
Nampiharina eto Madagasikara ny fomba famaritana vaovao ny olona sitrana (protocole de sortie) ka afaka mivoaka ny hopitaly nofaritan’ny OMS nanomboka ny 27 mey.
CMC Andohatapenaka Mandray marary 115 isan’andro ny dokotera iray
Tsy mitsaha-mitombo ireo olona mahatsiaro tsy fahasalamana tonga manatona eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka na ny Centre Medical COVID 19 amin’izao.
Coronavirus 209 indray voa teto Antananarivo
Niampy 209 ireo mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara, ka nampiakatra ny isan’ny voa hatramin’izay ho 3787, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly 9 jolay 2020.
Village Voara Andohatapenaka Nahazo tohana ara-tsakafo ireo mpiasan’ny fahasalamana
Mafy ny asa hatrehin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mampiodina ny Village Voara eny Andohatapenaka isan’andro na ny CMC.
Hary Naivo Rasamoelina “Porofoy fa sitrana ireo lazainareo fa sitrana ireo”
Tsy tokony horaisina an-jambany fotsiny ny zavatra miseho iraisam-pirenena fa mila tetikady ary tsy ampiharina ara-bakiteny,
Fanasana tanana Fihetsika tsotra, mahavonjy aina
Fihetsika faran’izay tsotra kanefa adinodino misy fotoana ny fanasana tanana.Ny nahazatra ny ankamaroan’ny oona hatrizay dia ny hoe manasa tanana rehefa hisakafo, na avy any amin’ny trano fivoahana ,
Vakinankaratra Mikatona ny sisintany, voarara ny famadihana
Nanamafy ireo fepetra hifehezana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus ny faritra Vakinankaratra,
Voka-dratsin’ny COVID-19 Haharitra hatramin` ny faran` ny taona ny fanadihadiana
Nanatanteraka fanadihadiana ny INSTAT mba hahafahana mamaritra ny voka-dratsy nateraky ny aretina COVID-19 taminà tokantrano maro eto Madagasikara.
Fandrindrana sy fiatrehana ny valanaretina “Tokony hovaina tanteraka ny CCO Covid-19”
Efa hita izao fa rehefa mafy ny raharaha dia toa nomena vahana kely ny Ministeran’ny fahasalamana.
Olona nanao fitiliana Miandry antsoina fa tsy mivezivezy eny Andohatapenaka
Mila miandry ny valin’ny fitiliana nataony ireo olona nanao izany, taorian’ny nandalovany teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka.
Alaotra Mangoro Nohamafisina ny fepetra hiadiana amin’ny coronavirus
Nohamafisina ny fepetra hitantanana ny ahamehana ara-pahasalamana, raha ny fanazavan’ny governoran’Alaotra mangoro, ny Dr Richard Ramandihamanana, ho an’ny faritra iadidiany.